Pau: Maynats restaurant inotsiva Chez Canaille kuHedas - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Pau: Maynats restaurant inotora Chez Canaille kuHedas
Pau: Maynats restaurant inotora Chez Canaille kuHedas
Peji inotendeukira muruwa rweHedas. Yekutengesa Chez Canaille, yakasikwa naPatrice Pierre munguva yekupedzisira ye2000, ichaenda kuMaynats.
Maynats zvinoreva "vana kana vana" muna Bearn, ichi ndicho nyaya Walter Alvarez uye Jonathan Vallenari, shamwari vaviri chikoro hotera kuna Tarbes, uyo akanga avimbisa kuti uvhure bhizimisi pamwe chete wokutanga.
Pashure zvakanakisa nzira dzakasiyana masangano mudunhu uye kumwewo, muresitorendi of Hotel Parc Beaumont muna Pau, ari Basque Saint-Pe-sur-Nivelle Inn, Mas Aromas pakati Idron asiwo Manville inotongwa muna Les Baux-de-Provence, vaviri vakaisa dzavo rainzwika pamusoro Pau resitorendi achitengeswa Emilie Perez.
"Taida kuita chimwe chinhu pamusoro pemufananidzo wedu: gastro yakanaka. Zvinhu zvose zvichave zvakagadzirirwa uye zvibereko zvino, "anotsanangura Gautier. Ndiye munyu, Jonatani anotarisira zvinonaka. Mahwendefa achava nyika-gungwa rine hafu yemiriwo yakagadzirwa, fruity uye chokoti ma dessert.
Masikati, menyu ezuva ichange iri 20 €; manheru ku37 uye 48 € pamusana wemafuta anovhenekera. Pamupu yavo, iri tsananguro: "Apo vakomana vanobika".
Gault & Millau Tsika 2019
Maynats ane zvikwani kubvira munaEpril 23 uye vari kushanda vasingashanduki kushandura chirevo chekugadzwa. Masvingo eimba huru ye 80 m2 ichave yakachena nemarambo emazuva ano, mbeu. Iyo midziyo, iri nyore uye chic: matafura emapuranga, faux zvigaro zvehumbodo uye machira ejira! Vanochengetedza zvimwe zvekicheni zvakasara naEmilie Perez asi vaifanira kuisa mari. Tarenda Yakave Muduku 2019 neGault & Millau, vakagamuchira rubatsiro rwekubatsira uye kuparidzira.
Vakatorawo sangano revanhu vakawanda www.tudigo.co kwavanotarisira kuunganidza 10 000 euros.
Jonathan Vallenari naGautier Alvarez muHurumende iri kuvakwa
Photo credit: OF
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.sudouest.fr/2019/05/17/pau-le-resto-maynats-remplace-chez-canaille-au-hedas-6090212-708.php